Unofanirwa Kuva Bhizinesi Rako PaPinterest? | Martech Zone
Unofanirwa Kuva Bhizinesi Rako PaPinterest?
Chipiri, August 6, 2013 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Uyu muti wekusarudza kubva Zoom Unogadzira Blogs chishandiso chakakura chemabhizinesi kusarudza kuti kana vasina zviwanikwa uye vanofanirwa kuisa nguva nesimba mukuvaka Pinterest zano. Iyo yakanaka infographic uye inoshanda chaizvo. Kana bhizinesi rako rikasarudza kusagadzira yavo Pinterest zano, zvakadaro, hazvireve kuti haugone piggyback pane vamwe vanhu mabhodhi! Vamwe vevatengi vedu vanotsigira uye vanoshanda nevakabudirira Pinterest bhodhi vanoshanda kuti vagovane ruzivo uye zvinoshanda zvinoshamisa.
Sezvineiwo nechero pasocial media saiti, zvakakosha kuti uzvidzidzise pachikuva, kudzidza izvo zvinosanganisirwa pakuve nhengo inoshingaira uye inguvai ingatore kuchengetedza nhoroondo yako Haasi ese mabhizinesi akakodzera Pinterest. Iwe unofanirwa kuona kana zvipo zvako uye kugona kwako kunoenderana nesaiti uye wozovaka zano rakasimba usati waita kukwakuka. Kujoinha chero saiti yemagariro inotora nguva, kushanda nesimba uye, mune Pinterest, mifananidzo inotyisa uye zvemukati wakanaka. Saka, rako bhizinesi rakagadzirira here kuzvipira?
Zoom Inogadzira Blogs inobvunza uye inotsanangudza mhinduro dzemibvunzo mina yakakosha kana uchifunga kuti bhizinesi rako rifanirwe kuisa mari muPinterest?
Unogona here kuramba uchishingairira paPinterest?
Une mifananidzo yekuona inobata, kana iwe unogona kuigadzira?
Chinangwa chako chevateereri chiri kushandisa Pinterest?
Iwe une zvakawanda zvekugovana pane izvo chete zvaunoita iwe?
Kana iwe ukafunga kuenda kumberi, ini ndinonyanya kukurudzira Karen Lelandbhuku Yekupedzisira Nongedzo kuPinterest yeBhizinesi. Karen akatitumira kopi uye - hongu - ndiko kubatana kwedu kwakabatana.
Tags: PinterestPinterest kushambadzirapinterest zano
htaccess: Strip Folder uye Redirect neRegex
Aug 6, 2013 pa 10: 46 AM
Kutenda zvakanyanya nekuverenga kwedu positi "Inofanirwa kuti Bhizinesi rako rive paPinterest" uye kugovana infographic nevaverengi vako.
Aug 16, 2013 pa 10: 37 AM
Mhoro. Ini ndinowedzera sei matipi uye zvinokurudzira zvinhu paPinterest kana ndisina nguva / graphical hunyanzvi hwekugadzira infographcs?
Aug 16, 2013 pa 11: 47 AM
Infographics chaizvo inongova chidimbu chidiki chekuzivikanwa kwePinterest…. mapikicha anonyatso kumira kupfuura chero chinhu. Tanga kushandisa saiti seDepositi Mifananidzo kuti uwane mamwe makuru magirafu asingadhuri - http://www.depositphotos.com (mutsigiri wedu) - wobva waputira matipi ako kana zvinhu zvinokurudzira pamusoro penzvimbo yakanaka!
Aug 17, 2013 pa 8: 12 AM
Sezvo ini ndisati ndashandura chero wevateveri vangu vePinterest kuva vatengi (sekuziva kwangu) ndiri kuzeza kushandisa mari pane izvi. Asi ini zvechokwadi ndichatora rairo iri riri kutariswa. Ndatenda.
Aug 17, 2013 pa 9: 28 AM
Ehezve, zvingave zvakanaka kuve neicho chakananga chinongedzo kukutendeuka. Dzimwe nguva zviitwa izvi ndezvekumaka nemasimba, zvakadaro. Vazhinji vanhu vane hombe dzinotevera paPinterest vanoonekwa sevatungamiriri veindasitiri uye zviwanikwa zvakavimbika - chimwe chinhu chekuchengeta mundangariro. Anofara Kupinza! 🙂